ငါ့ဝိညာဉ်မှေးစက်ရာ | A Sanctury Where My Soul Comes To Take A Rest
Comment submitted by my beloved one
August 26, 2009 at 5:58 am	(ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ)
အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက ကွန်မန့်လေးပါ… မှတ်မှတ်ရရမို့ POST တစ်ခုအနေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ် …
I read your essay, specifically, the fourth paragraph of your essay this very early morning. And tried to leave the message (not comment). Unfortunately, it failed two times. So this is the third time. Hope this reach to you. After I read the fourth paragraph of your essay, I never want to interfere with your coffee thing. How you should live is sometimes not that important for some people. But living as who you really are is rather important. So do as you are convenient. Any way thank you for giving me the privilege you gave me yesterday. I value it.
August 7, 2009 at 1:26 pm	(Essay)
July 14, 2009 at 11:51 am	(Poem)
( ဒီကဗျာလေးက ဟိုလွင့် ဒီလွင့် ဟိုရောက်ဒီရောက် ဖြစ်နေမှာတော့ သေချာပါတယ်။ ဒီကဗျာကို ကျွန်မရဲ့ ပြန်လည် တည်ဆောက်နေဆဲ ကာလမှာ ရေးခဲ့တာကြောင့် အခုကဗျာထဲက ပုံရိပ်တွေက ယခုလက်ရှိကျွန်မလို့ ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုဆီက ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမှန်း မသိတော့အောင် ဖရိုဖရဲ အပိုင်းပိုင်း အစစ လွင့်စင်သွားခဲ့တဲ့ ကျွန်မ သတ်မှတ်ထားတဲ့ တန်ဖိုး၊ ယုံကြည်မှု၊ အိပ်မက်တွေ နှင့် ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကို တစ်မှုန်စီလိုက်ကောက်နေရတဲ့ ကာလဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျွန်မ ဘာကိုမှမသိတော့တာတော့ တကယ့်လက်ရှိ ကျွန်မရဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်မ လက်ရှိကာလမှာ စာတွေအများကြီး မရေးချင်ပါဘူး။ လက်ရှိကာလ ကျွန်မ စိတ်ခံစားမှု အရောင်တွေ ရှုပ်ထွေးပါဝင်နေမှာ စိုးလို့ပါ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်နဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးကင်းလွတ်တဲ့ အနုပညာလက်ရာသန့်တွေ ဖန်တီးချင်ပါသေးတယ်။
March 28, 2009 at 3:28 am	(Uncategorized)
ချင်းမိုင် မနက်ခင်းတွေ လွမ်းနေရစ်ဦးမှာပါ.. နှစ်နှစ်တာကာလဟာ တကယ်ကို ဆေးရောင်စုံခဲ့တယ်.. ဆန်းပြားတဲ့ အရောင်တွေကြား.. ကျွန်မ တခန်းတနား နှလုံးသားချည်း သက်သက် ပျော်ဝင် တင်ဆက်ကပြခဲ့တယ်။ ဘ၀ဟာ ဆန်းပြားတယ်လို့ ပြောရမလား.. ရိုးစင်းလွန်းတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား..။ ဒါဟာ ကျွန်မ ဘ၀ထဲ ပထမဆုံး အကြိမ် အရိပ်အာဝသ ကင်းကင်း လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့မှုတစ်ခုပါ…။ တောင်တွေနဲ့ မြို့.. တောတွေ အုံ့ဆိုင်းတဲ့မြို့.. လှပတဲ့ မြို့လေး … ကျွန်မချစ်ခဲ့ပေမယ့် ချန်နေရစ်ခဲ့ရမှာပါ။ ကျွန်မချစ်တဲ့ အရာတွေကို ချန်ထားရစ်ခဲ့ဖို့.. ဆေးရောင်စုံနေ့ရက်တွေက သင်ကြားပေးခဲ့ပြီ။
လွမ်းပြီ ရန်ကုန်မြေရေ…။ ကျွန်မ မကြာခဏ ငြီးမိတဲ့ စကားတစ်ခွန်း။
အဖေ… သမီး ပြန်လာခဲ့ပြီ.. ဘ၀ဆီက သင်ယူမှုတွေတပွေ့တပိုက်နဲ့ သမီးပြန်လာခဲ့ပြီ….။
မာနတရားနဲ့ သိက္ခာတွေ.. ယုံကြည်မှုနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ.. သစ္စာတရားနဲ့ မြတ်နိုးမှုတွေ.. သင်းဂြိုဟ် ခံရဖူးတဲ့ ဟောဒီ ဆေးရောင်ဆန်းပြားနေ့ရက်တွေ ကျွန်မအတွက် ကြိုတင် သိမထားခဲ့ တဲ့ ဘ၀ရဲ့ သင်းရိုးညွှန်းတမ်း တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ရိုးရိုးသားသား ရှင်သန်ဖို့ပဲ ကုတ်ကပ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်လွယ်မှုနဲ့ မနာကျည်းတတ်မှုတွေဟာ ကျွန်မနှလုံးသားကိုကျ.. ဟိုး.. ချောက်နက်နက်တွေထဲ ဆွဲသွင်းသွားခဲ့လေတယ်..။ ရိုးရိုးသားသား ချစ်ခင် မြတ်နိုး ခဲ့ပါတယ်.. ရိုးရိုးသားသား တမ်းတညွတ်နူးခဲ့ဖူးပါတယ်..။ ရိုးရိုးသားသာ ကြည်နူးခဲ့ရတယ်။ ရိုးရိုးသားသား ၀မ်းနည်းခဲ့ရတယ်..။ ရိုးရိုးသားသား ရင်ကွဲနာနဲ့ ဆန်းပြာတဲ့ နေ့ရက်တွေကြား .. ဘ၀မှာ .. ဟောဒီလူတွေဆီမှာ.. ရိုးသားမှုတွေ အနည်းဆုံး ရှိကိုရှိမှာပါဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်က ကျွန်မရင်ထဲ ဇွဲကြီးစွာ ထင်ကျန်နေဆဲပါပဲ..။
ဒီည ကျွန်မ အဖေ့အိမ် ပြန်ခဲ့မယ်…..။
ရိုးရိုးသားသား နာကျင်ခဲ့တဲ့ အဖေ့သမီး.. ရိုးသားစွာပဲ အဖေ့အိမ် ပြန်ခဲ့ဦးမှာပါ….။
မတ်လ ၂၈ စနေနေ့
မနက် ၁၀း ၃၀
March 25, 2009 at 5:17 pm	(Uncategorized)
တိတ်တိတ်လေး ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ ရထား သံကြားတယ်
အရင်တုန်းက တိုက်ခဲ့တဲ့ လေတွေလို မဟုတ်သလိုပဲ….
ဘ၀ရဲ့  ဆု လာဘ်တွေ အဖြစ်
လွင့်ပါလေညင်းရယ် မင်းစိတ်စေရာ …….
အပျော်သဘောနဲ့ပဲ လှုပ်ခတ်သွား လှုပ်ခတ်သွား
မတ် ၂၆ ၂၀၀၉
January 11, 2009 at 10:17 pm	(Poem)
မနေ့က ကလေးငယ်ရဲ့ အိပ်မက်
ခုက ၂၀၀၉ တဲ့
၂၀၀၈ ကို အပြီးသတ်တိုက်စားလိုက်တာ မှန်ပေမယ့်
ဘယ်တန်ဖိုးတွေ စိတ်မှာ ပါးလျားသွားပြီး
ဘယ်တန်ဖိုးတွေ စိတ်မှာ ထိုးထောင်ထွက်လာခဲ့ပြီလဲ……
ဇန်န၀ါရီ ၁၂ ရက် ၂၀၀၉
December 5, 2008 at 7:18 pm	(Poem)
စိတ်တွေပဲ ချမ်းသလား ရုပ်ခန္ဓာကပဲ ချမ်းသလား
နူးနူးညံ့ညံ့ နေရာယူတတ်သူ ဆောင်း
မနှစ်က ဆောင်းလားဒီနှစ်ဆောင်းလား….
နှာသီးဖျားထဲ စိမ့်ဝင်လာတဲ့ လေက
နှလုံးသားကို တိတ်တခိုးလေး ဆောင့်ဆောင့်တိုးတယ်….
နွေးထွေးတဲ့ အလွမ်းတွေပါ ခေါ်လာခဲ့ပါ…
( အမှတ်တရ ချင်းမိုင်ဆောင်းညများသို့…..)
November 13, 2008 at 6:15 pm	(Poem)
စိတ်ရဲ့ ဆောက်တည်ရာ ဘယ်မှာ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကိုယ့်လက်နဲ့ အမြဲထူခဲ့ပါတယ်
စိတ်ကို နုတ်နုတ်စင်းနေတာ ဘယ်အရာလဲ
နည်းနည်းလေးမှ ယဉ်ကျေးချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး ……..
October 2, 2008 at 11:19 pm	(Poem)
October 2, 2008 at 10:46 pm	(Poem)
အမှန်ဆို ဒီည ပန်းရနံ့တွေ မွှေးပျံ့နေသင့်တာလေ….
အမှန်ဆို ဒီည ပင်လယ်ရဲ့ ဂီတမှာ မွှေ့လျော်နေသင့်တာလေ….။